Home > Travel Europe > Europe Top dara oké ọnụ Ụgbọ oloko
Ị adịghị ga-abụ a Bollywood omee na-ahụ n'ezie n'ime ndị a ọmarịcha, dara oké ọnụ ụgbọ oloko, ma unu nwere ka a hefty mmaji nke ego onwe na-enwe ha. Ọ bụrụ na ị nwetara ihe dị £ 3, 000+ ihapu, họrọ a na-aga, tinye ihe gị, ma kwe ka ahụmịhe nke ndụ a bido! Ihe nile banyere nke a ngwakọta nke okomoko, nkasi obi, na dum ọtụtụ nke sinik nlegharị anya na Europe ga-eme ka ihe agaghị echefu ahụmahụ.
Lee bụ ndu Europe atọ kasị ewu ewu, dara oké ọnụ ụgbọ oloko.
A ụgbọ okporo ígwè na ẹkenam njem na-ụwa nke ụgbọ okporo ígwè oké azụ na 1982 bụ otu ụgbọ okporo na nke ahụ bụ ka ọnụ ọgụgụ otu nhọrọ nke ọtụtụ a Europe njem na Okomoko insgbọ oloko Fans. Ya mere, maka onye ọ bụla nke na-ele anya ịnụ ụtọ okomoko na-enweghị atụ, Venice Simplon Orient Express bụ ụzọ ime ya. The kasị ama njem nke a dara oké ọnụ ụzọ mgbapụ bụ n'etiti London na Venice. Otú ọ dị, ọtụtụ apụghị iguzogide aga ọzọ Istanbul na Berlin, na Berlin ịbụ ikpeazụ ulo oru stop maka ụgbọ okporo ígwè. Mgbe ị na-agba ụgbọ oloko a, i nwere ụfọdụ nke ụwa kasị mma chefs arụ ọrụ na gị nri, na-otu na-akọrọ oke ime na na 5-kpakpando ihe.
Yana a restaurant ụgbọala na ezumike, e nwere a mma-stocked mmanya ebe maka ọbịa ... khm, njem. Mgbe ị na-eche creme de la creme nke dara oké ọnụ ụgbọ oloko, Venice Simplon Orient Express bụ ebe gị na uche na-amalite ozugbo!
Venice na London tiketi ga-eri gị ihe dị £ 2,700. The na-agba ịnyịnya na-ewe ụfọdụ 16 awa.
Belmond Royal Scotsman dara oké ọnụ Ụgbọ oloko
A ụgbọ okporo ígwè na ezi ndụ ruo eze omenala, Belmond Royal Scotsman na-bụ nrọ mezuru. N'ịbụ otu n'elu 3 dara oké ọnụ ụgbọ oloko, Belmond ka themed ụzọ gasị ị ga-n'anya. a na-agụnye Scotch malt Wiski nzọ ụkwụ, Western sinik ebube, Scotland na-Omuma Splendours, Dales Lakes & Gardens, na ọtụtụ ndị ọzọ. Belmond obụrede mbụre nke spa ọrụ, dị ka nke ọma! The 4-ụbọchị Highland Classicmost bụ ndị kasị ewu ewu tour. The ụgbọ okporo ígwè na-agba site April na October, na ọ na-ekpuchi ọtụtụ nnọọ ọmarịcha sinik Okirikiri, gụnyere Isle of Skye. Nọdụ ala azụ ma zuru ike site na nnukwu iko windows, ịṅụ na ụfọdụ nke kacha mma mmanya na gush n'elu ịma mma na bụ Scotland.
Tiketi ahịa na-amalite na £ 2.350 kwa onye.
The Golden Eagle Danube Express Luxurious insgbọ oloko
Ị gaghị enwe Europe na a ụzọ i na-aga na Golden Eagle Danube Express. The ụgbọ okporo ígwè prides na ihe ijuanya na dara oké ọnụ oke ime, Deluxe na nketa cabins. Ha na-na-anya isi nke ụlọ ndị kasị mma ụlọ nri ezumike na wiil. Site anya otu n'ime ndị kasị dara oké ọnụ ụgbọ oloko ị ga-ebi gbaa ịnyịnya Golden Eagle Danube Express na-enye 5 ka 12 ụbọchị 'njem. Ọ na-ekpuchi a nọmba nke ebe tinyere Budapest, Prague, Zurich, Vienna, Venice, Istanbul, Innsbruck, Sofia, na ọtụtụ ndị ọzọ. E nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ ebe (njegharị) ịhọrọ site na. All Golden Eagle Danube Express njem gụnyere anya-ụgbọ okporo ígwè tours na ahụmahụ.
Tiketi maka onye a mmalite si £ 22.260 maka Elu Deluxe Class.
A njem Europe gụnyere Okomoko insgbọ oloko na a obi ụtọ na ya nri ugbua, ma a njem Europe na nke ọ bụla n'ime ụgbọ oloko ndị a bụ ihe niile. Zụta a tiketi maka ihe ọ bụla ụgbọ okporo ígwè ọbụna site mgbe na-atụ na- Save A Train na-amalite na-anụ ụtọ Europe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ i nwere ike ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-luxurious-trains%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#oké ọnụ #Okomoko #traveleurope okomoko Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem